laamaha Amniga Hir-Shabeelle oo bilaabay fulinta Amar kasoo baxay Madaxweynaha - Wardeeq 24 TV
Home Warar-ka laamaha Amniga Hir-Shabeelle oo bilaabay fulinta Amar kasoo baxay Madaxweynaha
laamaha Amniga Hir-Shabeelle oo bilaabay fulinta Amar kasoo baxay Madaxweynaha
Ciidamada Booliska Dowlad Gobileed Hirshabeelle oo ay wehlinayeen, Ciidanka NISA , kuwa Guutada 3aad qeybta 27aad & kuwa ilaalada Madaxtooyada ayaa howlgallo waxaa ay ka sameeyeen Xaafadaha Magaalada Jowhar ee Caasimadda Maamulka Hir-Shabeelle.
Howlgalka ayaa ujeedkiisu ahaa mid looga hortagayay dadka isticmaalaya iyo kuwa Ganacsanaya waxyaabaha maanka dooriya, kaas oo uu amar ku bixiyay in laga hortago Madaxweynaha Hir-Shabeelle Cali Guudlaawe Xuseen.
Taliyaha Booliska degmada Jowhar Gaashaanle Dhexe Bashiir Xasan Xalafow ayaa sheegay in howlgalka oo ahaa mid guri guri ah lagu soo qabtay maandooriyaha Xashiishka & Khamriga oo lagu iibinayay Xaafadaha Magaalada Jowhar iyo dad ka Ganacsanayay.
Wuxuu hadalkiisa uu intaasi ku daray taliyaha in maandioriyaha kala duwan uu dhibaato ku haayo Bulshada gaar ahaan Dhalinyarada, isaga oo si cad u sheegay in dadka lagu soo qabtay maandooriyaha ay Maxkamad la tiigsan doonaan.
Dhinaca kale Wasiirka Amniga Maamulka Hir-Shabeelle Maxamed Cabdiraxmaan Kheyre ayaa dhankiisa uga mahad celiyay laamaha Amniga howlgalka ay sameeyeen, wuxuuna ku booriyay inay laba jibaaraan, isaga oo sidoo kale Shacabka ugu baaqay inay Ciidamada kala Shaqeeyaan sidii loo soo qaban lahaa dadka ka Ganacsanaya mukhaadaraadka.
Ka sokoow howlgalka laga sameeyay Magaalada Jowhar ayaa waxaa Maalmihii la soo dhaafay Ciidamada dowladda ay howlgallo ka dhan ah waxyaabaha maanka dooroya ka sameeynayeen degmooyin ka tirsan Gobolka Banaadir.
Previous articleMaamulka Gobolka Hiiraan oo ka qeylo dhaamiyay abaar kajirta Gobolkaas